China Sheet Rolled Steel Sheet Miaraka amin'ny haben'ny orinasa sy mpanamboatra | Mandresy
Takelaka vy miolaka mangatsiaka misy habe feno
Ny takelaka vy milomano mangatsiaka dia tapaka avy amin'ny coil sheet. Ny fitaovana fototra dia vy tsy misy firaka ambany, ny haben'ny hateviny dia 0.12mm ka hatramin'ny 3mm (11gauge ka hatramin'ny 36gauge). Ny sakan'ny coil dia 500mm ka hatramin'ny 1500mm.
Tsy mitovy amin'ny coil mafana mihodina, ny coil vy mangatsiaka dia manondro coil vy izay mihodina mivantana ho matevina miaraka amina roller amin'ny hafanan'ny efitrano Raha ampitahaina amin'ny coil mihodina mafana, ny coil dia mihodina mangatsiaka ary manana famaranana madio kokoa.
Malagasy ISO / JIS / GB / ASTM / EN, sns
Kilasy ara-materialy SPCC / SPHC / SPHD / SAE1006 / SAE1008 / DC01 / DC02
Fitsaboana ambonin'ny tany Menaka madio, manapoaka ary mandoko arakaraka ny takian'ny mpanjifa
Ny lanjan'ny bundle 3-5 taonina na takian'ny mpanjifa
Fananganana sy fanamboarana, Fitaovana ao an-trano, fitaterana, firafitra vy. Fitaovana fototra an'ny coil galvanis / coil aluzinc.
Fonosana fanondranana azo zahana ara-dranomasina mahazatra, fehikibo vy mifono ao amin'ny faran'ny roa.
(3) Ny lanjan'ny coil
3. Inona 'ny fahasamihafana misy eo “nanakodia mangatsiaka” SY “mangatsiaka nanakodia mainty annealed”?
–Ny coil vy miloko annealed vita amin'ny hatsiaka dia handalo amin'ny fanafanana, raha ny "coil vy mihodina mangatsiaka" kosa dia tsy hafana intsony.
4. Momba ny “menaka” ambonin'ny .
–Ny menaka ambonin'ny tany dia ny fisorohana ny vy tsy ho harafesina. Na dia tsy ny mpanjifa rehetra aza no maniry ny faritra misy menaka. Amin'ny ankapobeny dia manome ny vokatra tsy misy menaka amboniny izahay.
6. Manome santionany ve ianao?
–Eny, manome santionany izahay. Amin'ny ankapobeny ny santionany dia maimaim-poana.
Na dia tsy maimaimpoana aza ny irakiraka iraisam-pirenena. Haverinay ny vidin'ny mpandefa hafatra rehefa miara-miasa izahay.
Ny santionany dia halefa amin'ny alàlan'ny mpanamory fiaramanidina rehefa latsaky ny 1kg ny lanjany.
Teo aloha: Carbon Steel Hot Rolled Sheet Plate S235 SS400 ASTM A36
Manaraka: Takelaka mitafo vita amin'ny lamba mifono loko miendrika ravin-tampon-trano
Hamafin'ny ravin-koditra mangatsiaka vita anaty horonam-bolo ...